တရုတ်-မွန်ဂိုလီးယား နယ်စပ် ကုန်တင်ကုန်ချစခန်းတွင် ဖြတ်သန်းသွားလာသည့် တရုတ်-ဥရောပရထား အစီးရေ ၂,၀၀၀ ကျော်ရှိ - Xinhua News Agency
ဟူးဟောက်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသ နယ်စပ် Erenhot ကုန်တင်ကုန်ချစခန်း တွင် အင်္ဂါနေ့အထိ ယခုနှစ်အတွင်း ဖြတ်သန်းသွားသည့် တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထားအစီးရေ စုစုပေါင်း ၂,၁၀၃ စီးရှိရာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ထက် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်လာကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ ရထားအာဏာပိုင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
Erenhot ကုန်တင်ကုန်ချစခန်းသည် တရုတ်နှင့်မွန်ဂိုလီးယားနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကြားရှိ အကြီးဆုံး ကုန်းတွင်း ကုန်စည်စခန်းဖြစ်ပြီး တရုတ်-ဥရောပ ရထားလိုင်း ၅၃ ခု က ယင်း ကုန်တင်စခန်းကို ဖြတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါရထားလိုင်းများသည် တရုတ်နိုင်ငံ မြို့ပေါင်း ၄၀ ကျော်မှ ရော်တာဒမ်၊ မော်စကိုအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၀ နိုင်ငံက နေရာပေါင်း ၆၀ ကျော်ကို သွားလာနိုင်ကြောင်း သည်။
“အခုနှစ်ပိုင်းကစပြီး Erenhot ဘူတာမှာ နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေကို အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့တယ်။ ဒါက နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မယ့် တရုတ်-ဥရောပကုန်ရထားတိုးပွားလာမှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတယ်” Erenhot ဘူတာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကျန်းဖုန်က ဆိုသည်။ (Xinhua)
A China-Europe freight train runs through the national gate at Erenhot Port in north China’s Inner Mongolia Autonomous Region, Sept. 4, 2020. (Xinhua/Lian Zhen)
HOHHOT, Oct. 14 (Xinhua) — As of Tuesday,atotal of 2,103 China-Europe freight trains have passed through the border port of Erenhot in north China’s Inner Mongolia Autonomous Region this year, up 16 percent year on year, according to the local railway authorities.
“Since the beginning of this year, the border inspection equipment and facilities at the Erenhot station have been upgraded, which has helped boost the number of China-Europe freight trains passing through the border,” said Zhang Peng, an official with the Erenhot railway station. ■